Go'aankii Wasiirka Amniga Oo Caqabad Wajahaya - » Axadle Wararka Maanta
Go’aankii wasiirka amniga oo caqabad wajahaya –
Muqdisho (Axadle) – Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn u ogolaatay qoyska Ikraan Tahliil Faarax iyo shacabka Soomaaliyeed inay dhigaan dibad-bax nabadeed oo cadaalad loogu raadinayo Ikraan oo NISA shaacisay inay dishay Shabaab.
Wasiirka cusub ee amiga Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa shaaca ka qaaday in wasaaradda oo cuksaneyso dastuurka dalka ay qoyska Ikraan Tahliil Faarax u ogolaatay inay qabsadaan banaanbax nabadeed, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay mid dastuuri ah.
Cabdullaahi Maxamed Nuur oo xilka wasiirka amniga uu dhowaan u magacaabay Rooble ayaa sidoo kale xusay in cidkasta oo ka hor imaado banaan-baxaasi ay xukuumadda u aragto inay kasoo horjeedo cadaalad u helidda Ikraan Tahliil, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan u arkeynaa ciddii banaanbaxaas ka hor timaado ama qashqashaado inay kaalmeenayaan ciddii dhibaatadaan geysatay, waa xaq dastuuri ah oo ay leeyihiin ma dhici karto in la qashqashaado sidii marar badan dhici jirtay mana aqbaleyno,” ayuu yiri wasiirku.
Hase yeeshee, guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir, oo shir jaraa’id u qabtay wariyeyaasha ayaa kasoo horjeestay tallaabada wasiirka amniga, wuxuuna ku tilmaamay inay tahay arrin qar iska tuurnimo ah.
Waxa uu xusay in ka gobol ahaan aysan aqoonsaneyn wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur, sidoo kalena uusan ka heysan wax ogolaansho ah, sida uu isna hadalka u dhigay.
“Nin kursigiisa lagu muransan-yahay inuu yiraahdo dadka way banaanbixi karaan waa arrin qar iska tuurnimo ah laamaha amniga gobolkana ma aqoonsano anagana ogolaansho nagama heysto.”
Haddaba Amarka wasiirka amniga iyo go’aanka maamulka gobolka midkee dhaqan-galaya?
Labada nin ayaa awood ahaan marka la’eego waxaa saameyn badan wasiirka amniga oo heer federaal ah, halka guddoomiye ku-xigeenka uu yahay mas’uul heer gobol ah.
Wasiirka cusub ee amniga Soomaaliya ayaa sidoo kale ah nin aad ugu dhow ra’iisul wasaaraha, halka dhinaca kalena guddoomiye ku-xigeenka uu taageero weyn u yahay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday, isaga oo qeyb ka ahaa ololihiisa doorashada ee 2017-kii.
Dadka Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan u hadal haya go’aanada iska soo horjeeda ee ka soo kala baxay labada nin, waxaase shacabka aad u soo dhoweeyeen hadalka wasiirka cusub ee amniga ee qoyska Ikraan Tahliil u ogolaaday dibad-baxa nabadeed.
Si kastaba, waxay arrintu ku xiran tahay natiijada kasoo baxda wada-hadallada ka socda Villa Soomaaliya ee lagu dhex-dhexaadinayo Farmaajo iyo Rooble, kuwaas oo haatan maraya meel xasaasi ah, isla-markaana ay yihiin wada-hadaladu kuwa haatan sii soconaya.